Waxa lagu arko Nepal | Wararka Safarka
Mariela Carril | 07/10/2021 17:00 | Nepal, Maxaa la arkaa
Nepal Waa dal yar oo aan bad lahayn oo ku yaal Aasiya, oo ku yaal badweynta Hindiya. Waxay ku taal Himalayas dariskana waa Shiinaha, Hindiya iyo Bhutan. Haa, derisyadu aad bay u weyn yihiin laakiin weli way yar yihiin, Nepal waxay leedahay muuqaallo kala duwan iyo hodannimo dhaqameed aad u xiiso badan.
Maanta, Actualidad Viajes, waxaan diirada saarnaa waxa lagu arko Nepal.
2 Waxa lagu arko Nepal
Waa dal yar, afar geesle ah oo ku saabsan 147.516 kiiloomitir laba jibaaran oo dushiisa ah. Waxaan ka hadli karnaa saddexda aag: Terai, buuraha iyo buuraha, hab saddex siddo oo deegaanka ah oo ay gooyeen weelasha dhowr wabi oo buuraley ah. Terai waa xadka Hindiya sidaa darteed cimilada halkan waa mid kulul oo qoyan.
Buuraha, oo ku xiga buuraha, waxay leeyihiin dherer doorsooma oo u dhexeeya kun iyo afar kun oo mitir, waana dhul aad u barwaaqo badan oo la deggan yahay maadaama ay tahay aag dooxooyin hodan ah. Midka Kathmandu, tusaale ahaan. Ugu dambayntiina, buuraha, oo ah meesha Buurta Everest iyo kuwa kale ee meelaha dhaadheer ee dhallaanku joogaan. Waa qaybta xuduudda la leh Shiinaha. In kasta oo ay yihiin saddexdaas deegaan, haddana runtu waxay tahay in dalku is -diiwaangeliyo shan aag oo cimilada: cimilada, kulaylaha iyo kulaylaha, qabowga iyo arctic-ka hoose.
Ilaa 90 -meeyadii waddanku wuxuu ahaa boqortooyo buuxda kaas oo markii dambe noqday boqortooyo baarlamaan. Bilowgii qarnigii XNUMXaad iyo ka dib mudaaharaadyo badan oo caan ahaa sannadkii 2007 -dii ayaa la baabi’iyay boqortooyadii doorashadii 2008 -na wuu ku guuleystay Xisbiga Shuuciga ee Nepal Maxkamadda Maoist. Sannadkii 2015 -kii haweenay ayaa ku guulaysatay madaxweynenimada, Bidhya Devi Bhandan.
Waxaan ka hadalnaa Nepal inay tahay waddan boqortooyo ah muddo dheer si aan ugu bilowno booqo magaalada boqortooyada ee Patan. Halkan waxaa ku yaal macbudyo, taallooyin iyo macbudyo iyo hanti dhaqameed aad u badan. Dhismuhu waa cajiib oo dhismaha qasrigu aad buu u weyn yahay. Waa inaad soo qaadataa xusuus -qor oo macnahaan macdanta birta iyo qoryaha ama sawirrada Thangka waa weyn yihiin.
Fagaaraha Durbar waa meel lagu sawiro kun sawir waana kaliya mid ka mid ah saddexda nooc ee dooxada Kathmandu. Waxaad arki doontaa sagxadda lebenka ugu quruxda badan adduunka, tusaale ahaan. Halkan waxaa ah Krishna Temple.
Himalayassida iska cad waxaa lagu tiriyaa liiska. Aragtida buur -buurkan quruxda badan waa mid cajiib ah, tusaale ahaan, kan ka yimid Nagarkot, oo dhererkiisu yahay laba kun oo mitir. Buurtani waa ta labaad ee ugu sarraysa dooxada Kathmandu aragtuna waa mid ka mid ah kaadhadhka ugu caansan sidoo kale, haddii Buurta Everest…
Marka laga hadlayo Everest, haddii aadan rabin ama aadan fuuli karin, waxaad ka heli kartaa aragti wanaagsan hawada. Waxaa jira duulimaadyada dalxiiska saacad bixisa aragti weyn oo la hubo inay tahay mid lama ilaawaan ah.
Gobolka Annapurna waa mid cajiib ah. Dalxiisyada socdaalka waxaa laga kiraysan karaa Pokhara ilaa gobolkan oo ah janno run ah. The waddooyinka socodka waxay ka gudbaan tuulooyin qurux badan, goobo xajka xurmada leh, kaymaha geed iyo harooyinka buuraha ee cad. Safar aad loogu taliyay ayaa ah Wareegga Annapurna, muuqaalkeeda, ama Ghorepani Poon Hill Trail, tusaale ahaan. Jidadkani waxay leeyihiin heerar kala duwan oo dhib ah, markaa haddii socodku uusan ahayn waxa aad mar walba iska qori karto a rafting fuushan iyada oo raids ah ama tag paragliding.
Pokhara lafteedu waa meel fiican oo lagu kulmo, aad u qurux badan, halkaasna ikhtiyaar kale ayaa ah inaad tagto Sarangkot Scenic Point kuna raaxayso qorrax soo bax. Pokhara taariikhdu markay ahayd qarnigii toddoba iyo tobnaad, markii ay ahayd barta waddada ganacsiga ee u dhexeysa Hindiya iyo Shiinaha, sidaa darteed xitaa maanta sababta oo ah meeshan, taariikhdeeda iyo cunnadeeda macaan awgeed, weli waa meel caan ah.
Qeyb ahaan Bhaktapur wuxuu bixiyaa aragtiyo waaweyn oo Himalayas ah, laakiin sidoo kale waxaa jira pagodas iyo macbudyo la booqdo. Pagodas -ka si aad ah ayaa loo ilaaliyaa oo daaraha iyo macbudyada ayaa mudan in la booqdo. Magaaladu waa dhaqan aad iyo aad bay u dabbaaldegtaa ciidaha badan ee diinta.
Haddii aad jeceshahay kalluumeysiga, dabaasha ama doonyaha doonyaha waxaa jira Lake Phewa, haro biyo macaan halkaas oo had iyo jeer waxaa jira doonyo midab leh oo kiro ah, darbi -socod qurux badan iyo baararro yaryar oo badan. Ama waxaad ku socotaa xeebta harada, ama waxaad cabtaa biir ama si fudud ayaad ula dhacsan tahay dabeecadda iyo qaab dhismeedka jilicsan ee Nepalese ee wax walba qurxiya.
Dhulikhel waxay joogtaa 1550 mitir markaa hawo nadiif ah iyo aamusnaan ayaa la hubo. Waa magaalo qadiimi ah, oo leh waddooyin ciriiri ah oo cidhifsan oo ay ku hareereysan yihiin guryo dhaqameedyo leh albaabyo iyo daaqado midab leh. Sidoo kale waxaa jira doqonno iyo macbudyo la arko oo la sawiro.
El Beerta Qaranka ee Chitwan, aagga Terai, oo xuduud la leh Hindiya, waa goob kale oo dalxiis caan ah. Waxaa jira xayawaanno badan oo duurjoog ah, oo ay ku jiraan wiyisha, daayeerrada iyo qoob -ka -cayaarka, waana dhulka dadka Chepang. Haddii aad jeceshahay safaris tani waa meesha ugu wanaagsan ee loo tago Nepal, in kasta oo ay jiraan laba jardiinooyin qaran oo kale oo bixiya wax la mid ah: Beerta Qaranka Sagarmatha iyo Beerta Qaranka Bardiya.
Oo maxaa ku saabsan Kathmandu? Magaca caanka ah haddii ay jiraan, dooxadan quruxda badan waxay leedahay toddoba goobood oo lagu dhawaaqay Dhaxalka Adduunka by UNESCO. Nasiib darro, dhulgariirkii 2015 wuxuu burbur aad u weyn u geystay magaaladan taariikhiga ah waxayna qaadanaysaa waqti dheer in laga soo kabsado, waxaa taas ka sii daran haddii aad safar gasho ma seegi kartid.
Mid ka mid ah jiidashada ugu caansan halkan waa Boudhanath stupa, si fudud loogu yeero Boudha, laakiin sidoo kale waxaa jira Macbadka Pashupathinath ama Fagaaraha Durbar, badhtamaha magaalada, oo ah meeshii lagu caleemo saaray boqorrada ilaa qarnigii XNUMXaad. Laga soo bilaabo Kathmandu waxaad samayn kartaa safarka maalinta ilaa inta Macbadka Swayambhunath, 2500 oo sano jir ah, oo aad u qurux badan oo xagga dhismaha ah, oo ku taal buur geedo leh.
Haddii dhul aad u badan, buur, buur iyo haro ay ku jeclaadaan nolosha fudud ee tuulo, mar walba waad siin kartaa a eeg nolosha caadiga ah ee tuulada Nepalese. Marka laga fikiro dalxiiska, tuulada sida fiican loogu diyaariyay waa tuulada Newari ee Bandipur, oo ku taal waddada Pokhara. Waa tuulada Himalayan ee caadiga ah waxayna mar ahaan jirtay boosteejo caadi ah waddada u dhexaysa Hindiya iyo Tibet. Waa maxay goob qurux badan! Dhismayaasheeda waa kuwo duug ah, oo qadiimi ah, waxaa jira macbudyo, meelo quduus ah iyo kafateeriyaal casri ah oo si wanaagsan ula socda dalxiiska.
Illaa iyo hadda wax yar baa laga arki karaa Nepal, laakiin dabiici ahaan maahan waxa kaliya. Waxaan dhihi karnaa meelaha lagu booqdo Nepal waa Everst, Dolpo, Chitwan, Lumbini oo ah meesha Buddha ku dhalatay, Kumari, Dooxada Gokyo ,, Kaniisadda Kopan ama Tengboche. Waxa aan samayn karno waxay la xiriirtaa dhaqdhaqaaqyada buuraha, socod dhaqameedka iyo diimaha.
Ugu dambeyntii, Ka waran Covid 19 gudaha Nepal? Maalmahan, haddii aad haysato labada qiyaasood ee tallaalka Covid 19, ma karantiilid, labada qiyaasoodba waa inay haystaan ​​ugu yaraan 14 maalmood safarka ka hor. Haddii aadan haysan labada tallaal, waa inaad ka baaraandegtaa fiisaha ka hor intaadan u safrin Nepal oo aad karantiiliso 10 maalmood ka hor. Sidoo kale waa inaad raacdaa PCR -ga taban 72 saacadood ka hor haddii aad ku timaaddo hawada iyo 72 saacadood gudahood haddii aad timaaddo xagga dhulka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Maxaa la arkaa » Waxa lagu arko Nepal